I-Cottage ene-wood-fired tub eshushu, ilala abantu abayi-6-8
Ibekwe kwiihektare ezingama-20 zomgama wokuhamba weClent Hills eWorcestershire, le ndlu intle yomgangatho omnye inendawo yayo yokulala etshiswa ngamaplanga kunye nendawo yokuhlala yabucala. Emva kosuku lokuphonononga iinduli kunye namaphandle asekuhlaleni, unokuchitha ixesha lokuphumla nabahlobo kunye nosapho kwi-tub eshushu, ujonge phezulu ezinkwenkwezini.
Indlu yethu yokulala emi-3 (igumbi eli-1 elinesibini, igumbi eli-1 kunye negumbi lokulala eli-1) linekhitshi elitsha elineplani evulekileyo/igumbi lokuphumla/ lokutyela, elinesofa yokulala abantu aba-2 ngaphezulu.
Uya kufumana imiyalelo epheleleyo malunga nendlela yokufikelela kwipropati kunye nokuzihlola ngokwakho.
Umsebenzi uya kufumaneka ukuba aqhagamshelane ngexesha lokuhlala kwakho.
Kukho indawo yokupaka eninzi ekhoyo phambi kwesiza kunye negumbi lemoto enye ngaphandle kwendlwana.
Siza kubonelela ngeenkuni ukuze siqalise ibhafu eshushu etshiswe ngamaplanga kunye neenkuni ezongezelelweyo, ukubasa kunye nezitshisi zomlilo ziyafumaneka ukuze zithengwe.